ट्याटुमय फुटबल खेलाडी - खेलकुद - साप्ताहिक
तस्बिर : एपि
शरीरमा ट्याटु खोपाउनु फेसन हो, यसबाट नाम चलेका फुटबल खेलाडी मात्र कसरी अछुतो रहन सक्छन् र ? विश्व फुटबलमा ट्याटु बनाउनु फेसनजस्तै भएको छ र यी ट्याटु पनि कलात्मक रहने गरेका छन् । धेरै खेलाडीका लागि उनीहरूको शरीरमा खोपाइएको ट्याटुले विशेष अर्थ राख्छ ।
जस्तो ट्याटुकै कारण इंग्लिस फरवार्ड रहिम स्टर्लिङ चर्चामा आए । चर्चा मात्र कहाँ हो र ? उनको आलोचना नै बढी भयो । खासमा उनले आफ्नो दायाँ खुट्टाको तलतिर पूरा राइफलको ट्याटु बनाएका छन् । त्यो पनि एम–सिक्सटिन राइफल । पश्चिमेली देशमा गन–कल्चर वृद्धि भैरहेको र त्यसले ठूलै विपत्ति निम्त्याइ रहेको परिस्थितिमा स्टर्लिङले त्यसैलाई बढावा दिने खालको ट्याटु बनाएपछि उनको विरोध गर्ने
धेरै निस्किए ।
यसमा स्टर्लिङको भने फरक मत रह्यो । जमैकामा जन्मिएका यी खेलाडी लन्डनमै हुर्किएका हुन् । उनका बुबाको सडकमै गोली हानेर हत्या गरिएको थियो । स्टर्लिङले यो तथ्यलाई अहिलेसम्म बिर्सन सकेका छैनन् । यस्तोमा उनी गन–कल्चरका समर्थन त होइनन् नै, बरु उनी आफ्नो ट्याटुको माध्यमबाट यसविरुद्ध सामाजिक चेतना फैलाउन चाहन्छन् । निकै चर्को विरोध भएपछि स्टर्लिङले यसरी नै आफ्नो धारणा व्यक्त गरे । पछि उनको यो कामलाई इंग्लिस एफएले नै समर्थन गर्नु पर्‍यो ।
इंग्लिस फुटबलमा ट्याटु संस्कृति भित्राउने काम पूर्व खेलाडी डेभिड बेकह्यामले गरेका थिए । इंग्ल्यान्डतिर उनलाई ‘फेसन–आइकन’ मानिन्छ । उनको दुवै हात छोपिने गरी ट्याटु खोपाइएको छ । बेकह्यामलाई नै पछ्याउँदै अरुले पनि ट्याटु खोपाउन थालेको मानिन्छ ।
यसरी ट्याटु मन पराउनेमा इंग्लिस खेलाडी मात्र होइनन, अरु धेरै नाम चलेका खेलाडी पनि छन् । विश्व फुटबलमा अहिलेको पुस्ताका सबैभन्दा ठूला नाम हुन्– लियोनल मेसी । बार्सिलोनाका यी फरवार्ड पनि ट्याटु भनेपछि हुरुक्क हुने खेलाडी हुन् । चर्चित खेलाडी भएपछि उनको ट्याटुको चर्चा हुनु पनि स्वभाविक हो । मेसीले प्रत्येक वर्ष आफ्नो शरीरमा ट्याटुको संख्या बढाइरहेका छन् । उनको शरीरमा छोरादेखि आमासम्मको नाम छ । यस्तै उनले आफ्नो खुट्टामा १० नम्बर पनि खोपेका छन् । विश्व फुटबलमा प्राय: १० नम्बरका खेलाडी विशेष हुन्छन् । मेसी पनि १० नम्बरकै जर्सी लगाउँछन् ।
धेरै भन्दा धेरै ट्याटु बनाउनेमा ब्राजिलीयन खेलाडीहरू अग्रपंक्तिमा छन् । जस्तो, मार्सेलो । ब्राजिलीयन खेलाडीहरूमा यसरी ट्याटु संस्कृति भित्र्याउने श्रेय उनैलाई जान्छ । ट्याटु प्रेममा उनलाई उछिन्ने काम गरेका छन्, नेयमारले । नेयमारलाई विश्व फुटबलमा सर्वाधिक फेसन रूचाउने र ‘फेसन–सेन्स’ भएको खेलाडी मानिन्छ । उनले आफ्नो शरीरमा यति धेरै ट्याटु बनाएका छन् कि त्यसलाई गन्न गाह्रो हुने उनका साथीहरू बताउँछन् । नेयमार जत्तिकै ट्याटु बनाउने डानी एल्भास पनि हुन् । उनको शरीरमा परिवारका लगभग सबै सदस्यको नाम छ ।
एन्टोन ग्रिजमन फ्रान्सेली टिमका मुख्य खेलाडी हुन् । एटलेटिको म्याड्रिडका यी फरवार्डले दायाँ पाखुरामा जिसस क्राइस्टको अनुहार खोपाएका छन् । उनका औलामा पनि ‘होप’ खोपिएको छ । पूरा शरीरमा ट्याटु खोपाएका खेलाडीमा पर्छन्— स्पेनका सर्जियो रामोस । रियल म्याड्रिडका रामोस धार्मिक स्वभावका छन् । त्यसैले उनको शरीरमा मदर मेरी र जिसस क्राइस्ट देख्न पाइन्छ ।
डेनमार्कका लिभरपुल खेलाडी ड्यानिएल एगरको ट्याटु रंगीन नै छ । उनले पूरा शरीरमा आफ्नो देश डेनमार्कका आस्था र संस्कृति झल्कने चित्र खोपाएका छन् । ज्लाटन इब्रामोभिचको शरीरमा पनि थुप्रै ट्याटु छन् । तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित छ, एउटा वाक्य । त्यसमा लेखिएको छ, ‘वनली गड क्यान जज मि’ अर्थात् इब्रामोभिचलाई कसैले दाँजेर भन्न सक्छन् भने ती भगवान मात्र हुन्, अरु कोही होइनन् ।